မစိတ်မွှန်နေတဲ့ လူပျိုကြီးနှင့် ဖေ့ဘုတ်အွန်လိုင်းဖူးစာ ဂစ်တာရှိတ်မမ တို့တွေ့ကြသောအခါ - Barnyar Barnyar
မစိတ်မွှန်နေတဲ့ လူပျိုကြီးနှင့် ဖေ့ဘုတ်အွန်လိုင်းဖူးစာ ဂစ်တာရှိတ်မမ တို့တွေ့ကြသောအခါ
March 21, 2022 funny 0
“ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းကြပါ… ကျွန်တော့်ကို မြန်မြန်ဖမ်းပေးကြပါ အီးအဟီးဟီး😭…” လူပျိုကြီးဦးတိုး ရဲစခန်းထဲကို ငိုကြီးချက်မနဲ့ ပြေးဝင်သွားတယ်။
တာဝန်ကျရဲအရာရှိက- “ကဲ ထိုင်ပါ… တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မြင်မကောင်းပါလား?… ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ?… ဘာကိစ္စကြောင့် ဖမ်းရမှာလဲဆိုတာ ပြောပါဦး”
“ဒီလိုပါ ဦးရဲကြီးရယ်… ကျွန်တော်နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ချစ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို အခုတည်းခိုခန်းမှာ ချိန်းတွေ့ပြီးမှ ဒီအတိုင်းထားပစ်ခဲ့ပါတယ်… ကျွန်တော့်မှာ အပြစ်ရှိပါတယ်… ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းပါဗျာ”
“ဟာကွာ ခင်ဗျားမို့လို့ နှမချင်းမစာမနာ လုပ်ရက်တယ်… ကောင်းပြီလေ ဒါဆိုရင်တော့ ပြစ်မှုမြောက်သွားပြီ… ဖမ်းရမှာပေါ့။ ကဲ… ဖြစ်စဉ်ကို အစကနေသေချာ ပြောပြစမ်းပါအုန်း”
ရဲအရာရှိက စာအုပ်နဲ့ဘောလ်ပင်ယူပြီး လိုက်မှတ်ဖို့ ပြင်တယ်။ “ဒီလိုပါဦးရဲကြီးရယ်… အဲဒီအွန်လိုင်းကချစ်သူကို ခိုးပြေးဖို့ ကျွန်တော်တည်းခိုးခန်းတစ်ခုကို ချိန်းလိုက်ပါတယ်… ကျွန်တော်တည်းခိုခန်းကို ရောက်သွားတော့ သူက အရင်ရောက်နှင့်နေပါပြီ”
“ဟုတ်ပြီဆက်ပြော” “ကျွန်တော်အခန်းထဲဝင်သွားတော့ သူဘာလုပ်နေတယ်ထင်လဲ” “ဘာလုပ်နေလဲ…?” “ကုတင်ပေါ်ထိုင်ပြီး နှပ်ချေးထိုင် ကလော်နေတယ်ဗျာ…😣” “အဲ… ဟုတ်ပါပြီလေ… နောက်တော့ရော?”
“ကျွန်တော်လည်း ရင်တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ သူ့ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး သူ့လက်ကလေးကို ဖွဖွလေးငုံ့နမ်းလိုက်တော့… ဖွီ… အားလာလား သူ့လက်သည်းကြားမှာ နည်းနည်းနောနော ဂျီး(ချေး)တွေလားဗျာ😥”
“ဪ sexyကျချက်နော်… အင်း ဆက်ပြောပါဦး” “ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က လက်သည်းတွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပါလားဆိုတော့ သူက ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ?”
“အင်းးး… ဘာလုပ်လဲ?” “သူ့လက်သည်းတွေကို လျှာနဲ့ ထိုးကလော်နေတယ်လေ😣” “ထွီ… အဲလေ ယောင်ယောင်သွားလို့ ဆက်ပြော” “ကျွန်တော်လည်း ညားပြီးရင်တော့ ပြုပြင်လို့ရကောင်းပါရဲ့ ဆိုပြီး ပါးလေးကို ရွှတ်ခနဲ ငုံ့နမ်းလိုက်တာပေါ့….”
“ဘာဆက်ဖြစ်လဲ?” “ကျွန်တော်နမ်းတဲ့ နေရာတစ်ခုတည်းကွက်ပြီး မည်းသွားတယ်😥” “ဟင်?… ခင်ဗျားနှာခေါင်းမှာ အိုးမည်းတွေ ပေနေလို့များလား?” “ဘယ်ကလာ… ဖို့ထားတဲ့ သူ့မိတ်ကပ်တွေ ပျက်သွားပြီး သူ့နဂိုအသားရေပေါ်လာတာ😓” “ဗျာ??….”
“အဲဒါနဲ့ သူ့ပါးကို ကမန်းကတန်းလက်နဲ့ ပွတ်ကြည်လိုက်တော့မှ အာပါ့ပါး ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်ကရုပ်နဲ့ တခြားစီ… မည်းလိုက်တဲ့အသားဗျာ… ယင်ကောင်နားရင်တောင် ရှာတွေ့မယ် မထင်ဘူး”
“အဲလောက်တောင် မည်းသလားဗျ?” “ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်… အချစ်မှာ အသားအရည်မလိုဘူး… ပိုလျှံနေတာတွေ မလိုဘူး… အခုသွားဖျက်လို့ ပြောလိုက်တော့ ကပျာကယာ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်”
“စိတ်ဝင်စားလာပြီ… ဆက်စမ်းပါဦး” “ခဏအကြာ ရေချိုးခန်းထဲကနေ သူပြန်ထွက်လာတော့ သူ့လက်ထဲမှာ ဘယ်ညာတစ်ခုစီ အပိုပြန်ပါလာတယ်”
“ဟင်!!!… ဘာတွေတုံးဗျ?” “ဖင်တုနဲ့ ရင်တု” “ဂျာ…” “တကယ်ပါဗျာ ဂစ်တာရှိတ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့ သူ့ပုံစံက ပိန်ခြောက်မည်းမှောင်နေလိုက်တာများ ကြေးနန်းကြိုးကို တိပ်အမည်း ပတ်ထားသလိုမျိုး😭”
“ခွီးခွီး😅… အဲလေ… အဟမ်း အဟမ်း… ခင်ဗျားကလည်း ဒီလောက်နဲ့တော့ အပြစ်ဆိုစရာလားဗျာ?” “ဒီလောက်အထိတော့ ကျွန်တော် စိတ်ခိုင်ပါသေးတယ်… ပြောရရင် တဏှာစိတ် မကုန်သေးဘူးဆိုပါတော့” “ပုထုဇဉ်သဘာဝပေါ့” “ကုတင်ပေါ် သူပြန်ရောက်လာတော့ ကျွန်တော့်ပုခုံးကို သူ့ခေါင်းလေးနဲ့ ပေးမှီထားလိုက်တယ်”
“ဟဲဟဲ😁… ကောင်းခန်းရောက်ပြီမလား?” “အဲဒီအချိန် ကျွန်တော်လည်း ဘာရယ်ညာရယ် မသိတော့ဘူး ‘မ’ စိတ်စမွှန်တဲ့ အချိန်ပေါ့” “အင်း….☻”
“သူ့ဆံပင်လေးကို အသာအယာပွတ်ပြီး နှစ်ကိုယ်ကြားလေး ပြောလိုက်တယ်… ဆံပင်လေးကို တစ်သက်လုံးပိုင်ဆိုင်ချင်လိုက်တာဆိုတော့” “အဲဒီတော့… သူကဘာပြောလဲ?” “ရော့… ယူချင်ယူလေဆိုပြီး သူ့ဆံပင်အတုကြီး ချွတ်ပေးတယ်”
“ဟိုက်?😲… စောင်ကတုံးမကြီးပေါ့… အဲလေ ယောင်လို့ အင်း အဟဲ… ဒီလောက်နဲ့ စိတ်ပျက်စရာလားဗျာ… အချိန်တန်ရင်ပြန်ပေါက်မှာပေါ့” “မွေးရာပါ ဆံပင်မပေါက်တဲ့ ရောဂါတဲ့ဗျာ😭” “တိန်… မှတ်ကရော” “ဒီအထိ သည်းခံနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ”
“သူက လူချင်းခဏခွာလိုက်ပြီး သူ့ချိုင်းမွှေးတွေကို တဗျင်းဗျင်း ဆွဲနုတ်နေသေးတယ်” “ဟိုက်… အဲလေ… ချိုင်းမွှေးပေါက်တာ သဘာဝပါ”
“ဒီလောက်နဲ့ မပြီးသေးဘူး” “ဟင်?!” “နုတ်ပြီးသား သူ့ချိုင်းမွှေးတွေကို လက်နဲ့ကိုင်ပြပြီး ပြောတယ်… ကျွန်တော့်မှာ နှုတ်ခမ်းမွှေးမရှိလို့ ဆင်ကော်နဲ့ ကပ်ပေးရမလားတဲ့” “ထွီ…😲”
ရဲအရာရှိက သူ့နှုတ်ခမ်းကို လက်နဲ့ကမန်းကတန်း လှမ်းပိတ်တယ်။ “ကျွန်တော်လည်း ကျန်တဲ့နေရာမကြည့်ရဲ့တော့ဘဲ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်.. အမယ်… ရုပ်သာဆိုးတာဗျ… ပြုံးလိုက်ရင်တော့ လွှတ်လှ😊”
“တော်ပါသေးရဲ့… ကောင်းတဲ့နေရာလည်း ရှိသေးလို့” “သွားလေးတွေက ပုလဲလုံးလေးတွေလိုပဲနော်လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့” “အင်း….” “ဒါတောင် ရေဆေးရသေးဘူးဆိုပြီး သူ့အံပုံကြီး ချွတ်ပြတယ်😓”
“ဟိုက်!!! သွားကျိုးမကြီး… ထွီ အေ့ ဝေါ့” ရဲအရာရှိက ရင်ဘတ်ကလေးဖိပြီး ကပျာကယာ ရေထသောက်တယ်။ ပြီးမှပြန်လာထိုင်တယ်။
“ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မျက်စိစုံမှိတ် ချစ်တော့မယ်ဆိုပြီး သူ့ခါးကို အတင်းဆွဲဖက်လိုက်တယ်” “အဲဒီတော့???” “သူကပြောတယ်… ဖြေးဖြေးဖက် ကလေးပျက်ကျမယ်တဲ့” “ဟေ!! အဟားဟား နွား နွား” 👉👦👈
“ဟင်? လက်ညှိုးကဘာလို့ ကျွန်တော့်ကိုထိုးတာလဲ။ 😢😢 လှောင်တယ်ပေါ့?” “အဟီး… ခွိခွိ… ယောင်ယောင်သွားလို့ပါ မရီတော့ပါဘူး… အဟမ်း… အဟမ်း… ဆက်ပြောပါဦး”
“ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မျက်ရည်တွေ ဝဲတက်လာပြီး တစ်ချိုးတည်း ထွက်ပြေးလာတော့တာပဲ အဟင့် ဟင့်…😢” “ဪ အဲလိုလား? အဟင်း ခစ်ခစ် 😂 ဒါနဲ့နေစမ်းပါဦး… ခင်ဗျားဒဏ်ရာတွေကရော ဘယ်လိုရလာခဲ့တာလဲ?”
“ထွက်မပြေးခင်က သူ့ကိုမယူနိုင်ဘူးပြောလို့ သူ့ခြေတုကြီးချွတ်ပြီး တဖုန်းဖုန်းနဲ့ ရိုက်နှက်တော့တာပါပဲဗျာ… အီး အဟီး အဟင့်😭” “အဟား….. ဟား…..ဟား….ဟား….😂😁😆”
မစိတျမှနျနတေဲ့ လူပြိုကွီးနှငျ့ ဖဘေု့တျအှနျလိုငျးဖူးစာ ဂဈတာရှိတျမမ တို့တှကွေ့သောအခါ
“ကြှနျတေျာ့ကို ဖမျးကွပါ… ကြှနျတေျာ့ကို မွနျမွနျဖမျးပေးကွပါ အီးအဟီးဟီး😭…” လူပြိုကွီးဦးတိုး ရဲစခနျးထဲကို ငိုကွီးခကျြမနဲ့ ပွေးဝငျသှားတယျ။
တာဝနျကရြဲအရာရှိက- “ကဲ ထိုငျပါ… တဈကိုယျလုံးလညျး ဒဏျရာတှနေဲ့ မွငျမကောငျးပါလား?… ဘယျလိုဖွဈလာတာလဲ?… ဘာကိစ်စကွောငျ့ ဖမျးရမှာလဲဆိုတာ ပွောပါဦး”
“ဒီလိုပါ ဦးရဲကွီးရယျ… ကြှနျတျောနဲ့ အှနျလိုငျးမှာ ခဈြကွိုကျနတေဲ့ ကောငျမလေးကို အခုတညျးခိုခနျးမှာ ခြိနျးတှပွေီ့းမှ ဒီအတိုငျးထားပဈခဲ့ပါတယျ… ကြှနျတေျာ့မှာ အပွဈရှိပါတယျ… ကြှနျတေျာ့ကို ဖမျးပါဗြာ”
“ဟာကှာ ခငျဗြားမို့လို့ နှမခငျြးမစာမနာ လုပျရကျတယျ… ကောငျးပွီလေ ဒါဆိုရငျတော့ ပွဈမှုမွောကျသှားပွီ… ဖမျးရမှာပေါ့။ ကဲ… ဖွဈစဉျကို အစကနသေခြော ပွောပွစမျးပါအုနျး”
ရဲအရာရှိက စာအုပျနဲ့ဘောလျပငျယူပွီး လိုကျမှတျဖို့ ပွငျတယျ။ “ဒီလိုပါဦးရဲကွီးရယျ… အဲဒီအှနျလိုငျးကခဈြသူကို ခိုးပွေးဖို့ ကြှနျတျောတညျးခိုးခနျးတဈခုကို ခြိနျးလိုကျပါတယျ… ကြှနျတျောတညျးခိုခနျးကို ရောကျသှားတော့ သူက အရငျရောကျနှငျ့နပေါပွီ”
“ဟုတျပွီဆကျပွော” “ကြှနျတျောအခနျးထဲဝငျသှားတော့ သူဘာလုပျနတေယျထငျလဲ” “ဘာလုပျနလေဲ…?” “ကုတငျပျေါထိုငျပွီး နှပျခြေးထိုငျ ကလျောနတေယျဗြာ…😣” “အဲ… ဟုတျပါပွီလေ… နောကျတော့ရော?”
“ကြှနျတျောလညျး ရငျတဒိတျဒိတျနဲ့ သူ့ဘေးမှာ ဝငျထိုငျလိုကျပွီး သူ့လကျကလေးကို ဖှဖှလေးငုံ့နမျးလိုကျတော့… ဖှီ… အားလာလား သူ့လကျသညျးကွားမှာ နညျးနညျးနောနော ဂြီး(ခြေး)တှလေားဗြာ😥”
“ဪ sexyကခြကျြနျော… အငျး ဆကျပွောပါဦး” “ဒါနဲ့ ကြှနျတျောက လကျသညျးတှကေို သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးထားပါလားဆိုတော့ သူက ဘာလုပျတယျထငျလဲ?”
“အငျးးး… ဘာလုပျလဲ?” “သူ့လကျသညျးတှကေို လြှာနဲ့ ထိုးကလျောနတေယျလေ😣” “ထှီ… အဲလေ ယောငျယောငျသှားလို့ ဆကျပွော” “ကြှနျတျောလညျး ညားပွီးရငျတော့ ပွုပွငျလို့ရကောငျးပါရဲ့ ဆိုပွီး ပါးလေးကို ရှတျခနဲ ငုံ့နမျးလိုကျတာပေါ့….”
“ဘာဆကျဖွဈလဲ?” “ကြှနျတျောနမျးတဲ့ နရောတဈခုတညျးကှကျပွီး မညျးသှားတယျ😥” “ဟငျ?… ခငျဗြားနှာခေါငျးမှာ အိုးမညျးတှေ ပနေလေို့မြားလား?” “ဘယျကလာ… ဖို့ထားတဲ့ သူ့မိတျကပျတှေ ပကျြသှားပွီး သူ့နဂိုအသားရပေျေါလာတာ😓” “ဗြာ??….”
“အဲဒါနဲ့ သူ့ပါးကို ကမနျးကတနျးလကျနဲ့ ပှတျကွညျလိုကျတော့မှ အာပါ့ပါး ဖစျေ့ဘုတျပျေါကရုပျနဲ့ တခွားစီ… မညျးလိုကျတဲ့အသားဗြာ… ယငျကောငျနားရငျတောငျ ရှာတှမေ့ယျ မထငျဘူး”
“အဲလောကျတောငျ မညျးသလားဗြ?” “ဒါနဲ့ ကြှနျတျောပွောလိုကျတယျ… အခဈြမှာ အသားအရညျမလိုဘူး… ပိုလြှံနတောတှေ မလိုဘူး… အခုသှားဖကျြလို့ ပွောလိုကျတော့ ကပြာကယာ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျသှားတယျ”
“စိတျဝငျစားလာပွီ… ဆကျစမျးပါဦး” “ခဏအကွာ ရခြေိုးခနျးထဲကနေ သူပွနျထှကျလာတော့ သူ့လကျထဲမှာ ဘယျညာတဈခုစီ အပိုပွနျပါလာတယျ”
“ဟငျ!!!… ဘာတှတေုံးဗြ?” “ဖငျတုနဲ့ ရငျတု” “ဂြာ…” “တကယျပါဗြာ ဂဈတာရှိတျလို့ ကြှနျတျောထငျထားတဲ့ သူ့ပုံစံက ပိနျခွောကျမညျးမှောငျနလေိုကျတာမြား ကွေးနနျးကွိုးကို တိပျအမညျး ပတျထားသလိုမြိုး😭”
“ခှီးခှီး😅… အဲလေ… အဟမျး အဟမျး… ခငျဗြားကလညျး ဒီလောကျနဲ့တော့ အပွဈဆိုစရာလားဗြာ?” “ဒီလောကျအထိတော့ ကြှနျတျော စိတျခိုငျပါသေးတယျ… ပွောရရငျ တဏှာစိတျ မကုနျသေးဘူးဆိုပါတော့” “ပုထုဇဉျသဘာဝပေါ့” “ကုတငျပျေါ သူပွနျရောကျလာတော့ ကြှနျတေျာ့ပုခုံးကို သူ့ခေါငျးလေးနဲ့ ပေးမှီထားလိုကျတယျ”
“ဟဲဟဲ😁… ကောငျးခနျးရောကျပွီမလား?” “အဲဒီအခြိနျ ကြှနျတျောလညျး ဘာရယျညာရယျ မသိတော့ဘူး ‘မ’ စိတျစမှနျတဲ့ အခြိနျပေါ့” “အငျး….☻”
“သူ့ဆံပငျလေးကို အသာအယာပှတျပွီး နှဈကိုယျကွားလေး ပွောလိုကျတယျ… ဆံပငျလေးကို တဈသကျလုံးပိုငျဆိုငျခငျြလိုကျတာဆိုတော့” “အဲဒီတော့… သူကဘာပွောလဲ?” “ရော့… ယူခငျြယူလဆေိုပွီး သူ့ဆံပငျအတုကွီး ခြှတျပေးတယျ”
“ဟိုကျ?😲… စောငျကတုံးမကွီးပေါ့… အဲလေ ယောငျလို့ အငျး အဟဲ… ဒီလောကျနဲ့ စိတျပကျြစရာလားဗြာ… အခြိနျတနျရငျပွနျပေါကျမှာပေါ့” “မှေးရာပါ ဆံပငျမပေါကျတဲ့ ရောဂါတဲ့ဗြာ😭” “တိနျ… မှတျကရော” “ဒီအထိ သညျးခံနိုငျပါသေးတယျဗြာ”
“သူက လူခငျြးခဏခှာလိုကျပွီး သူ့ခြိုငျးမှေးတှကေို တဗငျြးဗငျြး ဆှဲနုတျနသေေးတယျ” “ဟိုကျ… အဲလေ… ခြိုငျးမှေးပေါကျတာ သဘာဝပါ”
“ဒီလောကျနဲ့ မပွီးသေးဘူး” “ဟငျ?!” “နုတျပွီးသား သူ့ခြိုငျးမှေးတှကေို လကျနဲ့ကိုငျပွပွီး ပွောတယျ… ကြှနျတေျာ့မှာ နှုတျခမျးမှေးမရှိလို့ ဆငျကျောနဲ့ ကပျပေးရမလားတဲ့” “ထှီ…😲”
ရဲအရာရှိက သူ့နှုတျခမျးကို လကျနဲ့ကမနျးကတနျး လှမျးပိတျတယျ။ “ကြှနျတျောလညျး ကနျြတဲ့နရောမကွညျ့ရဲ့တော့ဘဲ သူ့နှုတျခမျးလေးကိုပဲ စိုကျကွညျ့နလေိုကျတယျ.. အမယျ… ရုပျသာဆိုးတာဗြ… ပွုံးလိုကျရငျတော့ လှတျလှ😊”
“တျောပါသေးရဲ့… ကောငျးတဲ့နရောလညျး ရှိသေးလို့” “သှားလေးတှကေ ပုလဲလုံးလေးတှလေိုပဲနျောလို့ ကြှနျတျောပွောလိုကျတော့” “အငျး….” “ဒါတောငျ ရဆေေးရသေးဘူးဆိုပွီး သူ့အံပုံကွီး ခြှတျပွတယျ😓”
“ဟိုကျ!!! သှားကြိုးမကွီး… ထှီ အေ့ ဝေါ့” ရဲအရာရှိက ရငျဘတျကလေးဖိပွီး ကပြာကယာ ရထေသောကျတယျ။ ပွီးမှပွနျလာထိုငျတယျ။
“ကြှနျတျောလညျး ဖွဈခငျြရာဖွဈ မကျြစိစုံမှိတျ ခဈြတော့မယျဆိုပွီး သူ့ခါးကို အတငျးဆှဲဖကျလိုကျတယျ” “အဲဒီတော့???” “သူကပွောတယျ… ဖွေးဖွေးဖကျ ကလေးပကျြကမြယျတဲ့” “ဟေ!! အဟားဟား နှား နှား” 👉👦👈
“ဟငျ? လကျညှိုးကဘာလို့ ကြှနျတေျာ့ကိုထိုးတာလဲ။ 😢😢 လှောငျတယျပေါ့?” “အဟီး… ခှိခှိ… ယောငျယောငျသှားလို့ပါ မရီတော့ပါဘူး… အဟမျး… အဟမျး… ဆကျပွောပါဦး”
“ဒါနဲ့ ကြှနျတျောလညျး မကျြရညျတှေ ဝဲတကျလာပွီး တဈခြိုးတညျး ထှကျပွေးလာတော့တာပဲ အဟငျ့ ဟငျ့…😢” “ဪ အဲလိုလား? အဟငျး ခဈခဈ 😂 ဒါနဲ့နစေမျးပါဦး… ခငျဗြားဒဏျရာတှကေရော ဘယျလိုရလာခဲ့တာလဲ?”
“ထှကျမပွေးခငျက သူ့ကိုမယူနိုငျဘူးပွောလို့ သူ့ခွတေုကွီးခြှတျပွီး တဖုနျးဖုနျးနဲ့ ရိုကျနှကျတော့တာပါပဲဗြာ… အီး အဟီး အဟငျ့😭” “အဟား….. ဟား…..ဟား….ဟား….😂😁😆”
သုံးရကျအတှငျး ခွလေကျတှေ ဖွူဖှေး လာတဲ့ အိမျတှငျးဆေး
Total Hits : 333247